Andrea Yates को प्रोफाईल
अनुहारको अनुहार र हत्याको आमाको दुःखद कथा
शिक्षा र उपलब्धिहरू:
Andrea (केनेडी) योट्स2जुलाई, 1964 मा ह्यूस्टन, टेक्सास मा जन्मिएको थियो। उनले 1982 मा ह्यूस्टन मा मिल्बी हाई स्कूलबाट स्नातक गरे। उनले क्लास वाल्टिकोटोरियन, स्विम टोलीको कप्तान र राष्ट्रिय सम्मान सोसायटीमा एक अधिकारी थिए। उनले ह्यूस्टन विश्वविद्यालयमा दुई-वर्ष पूर्व नर्सिङ कार्यक्रम पूरा गरे र त्यसपछि 1986 मा ह्यूस्टनमा नर्सिङ अफ टेक्सास विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरे।
उनले टेक्सास एमडी एन्ड एन्डरसन क्यान्सर युनिवर्सिटीमा 1986 बाट 1 994सम्म एक दर्ता नर्सको रूपमा काम गरे।
Andrea Rusty Yates Meets:
Andrea र Rusty Yates, 25, दुवै हस्टन मा आफ्नो अपार्टमेंट परिसरमा भेटिए। अन्ड्रिया, जो सामान्यतया आरक्षित थियो, कुराकानी शुरु गर्यो। अन्ड्रिया कहिल्यै 23 वर्ष नपुगेको हुँदा र Rusty त्यो एक टूटेको सम्बन्धबाट निको पार्ने बैठक पूरा गर्नु पहिले कुनै पनि मिति नहीं था। तिनीहरू अन्तमा एकसाथ बसाइन् र आफ्नो अध्ययन धेरै धार्मिक अध्ययन र प्रार्थनामा संलग्न छन्। तिनीहरू 193 9, 1965 मा विवाहित भए। उनीहरूले आफ्ना अतिथिहरूको साथ साझेदारी गरे कि उनीहरूलाई प्रकृतिको रूपमा प्रदान गरेका थुप्रै बच्चाहरू।
अन्डेरा आफैं फर्टाइल मार्टलमा बोलाइयो
उनीहरूको आठ वर्षको विवाहमा यतिका पाँच जना छोराछोरी थिए; चार केटा र एक केटी। अन्धाले जोगिंग र स्विमिंग रोक्यो जब उनी आफ्नो दोस्रो बच्चा संग गर्भवती भए। मित्रहरू भन्छन् कि उनी अनन्य भए। घर-विद्यालयको निर्णय छोराछोरीले उनीहरूको अलगावमा खाना खाएको जस्तो देखिन्छ।
फरवरी 26, 1994 - नूह गेट्स, डिसेम्बर 12, 1 995- जॉन यट्स, सेप्टेम्बर 13, 1 997- पॉल यट्स, फेब्रुअरी 15, 1 999 - ल्यूक यट्स, र नोभेम्बर 30, 2000 - मैरी यट्सको अन्तिम बच्चा जन्मिन लागेको।
1 996मा फ्लोरिडामा रौतहट स्वीकार्य काम र पारिवारिक इलिनोलेमा 38-फुट यात्रा ट्रेलर चलेको थियो। फ्लोरिडामा बेलायतले गर्भवती भएकी थिइन् तर बिस्फोटक।
1997 मा तिनीहरू ह्यूस्टन फर्किए र उनीहरूको ट्रेलरमा बसिरहेका थिए किनभने रौतले "लाइभ लाइभ" गर्न चाहन्थे। अर्को वर्ष। रौतहट एक 350-वर्ग फुट, नवनिर्मित बस खरिद गर्ने निर्णय भयो जसले आफ्नो स्थायी घर बनायो। लूका छोराछोरीको संख्या चारमा ल्याउनु भएको थियो। जीवित अवस्थाहरू हानिए र अन्धाको पागलपनले सतहमा उड्यो।
माइकल Woroniecki एक यात्रा मंत्री थियो जसबाट रौतले आफ्नो बस खरिद गरे र जसका धार्मिक विचारहरूले रौल र अन्ड्रिया दुवैको प्रभाव पारेको थियो। रौतहले मात्र वेरोनोनीकीका विचारहरूसँग सहमत भए तर अन्धावादीहरूले चरमवादी उपदेश ग्रहण गरे। उनले प्रचार गरे, "महिलाहरूको भूमिका हव्वाको पापबाट निकालेका छन् र नरकमा जाँदैछन् कि बुरी आमाहरू नरकमा जान सक्ने खराब बच्चाहरू सिर्जना गर्छन्।" एन्ड्रियाकोकिकीले एन्ड्रियाकको परिवारलाई चिन्ता बढ्यो कि एन्ड्रियाको यति पूर्णतः कैद गरिएको थियो।
पागलपन र आत्महत्या
16 जून, 1 999 मा, अन्ड्रियाले रौतलाई बोलाए र घर फर्कन आग्रह गरे। उनले उहाँलाई मनपराउन खोजे र उनको औंलाहरूमा चबाए। अर्को दिन, उनले गोलियों को ओवरडोज ले आत्महत्या गर्न कोसिस गरे पछि उनी अस्पतालमा अस्पताल गए। त्यो मेथोडिस्ट अस्पताल मनोचिकित्सा इकाई को हस्तांतरित गरियो र प्रमुख अवसाद को विकार संग निदान भयो। मेडिकल कर्मचारीले तिनलाई समस्याहरूबारे छलफल गर्दा अवार्डलाई वर्णन गरे।
यद्यपि, जून 24 मा उनी एडिडीप्रिन्टेंट र रिजर्भ गरिएको थियो।
घरको बेला, अन्ड्रियाले औषधि नपाए र परिणामस्वरूप तिनले आत्म-उत्पीड़न गर्न थाले र आफ्ना छोराछोरीलाई खुवाउन इन्कार गरे किनभने उनीहरूले धेरै महसुस गरे। उनले सोचेको छ कि छतमा भिडियो क्यामेराहरू थिए र टेलिभिजनमा क्यारेक्टरहरू उनको र बच्चासँग कुरा गरिरहेका थिए। उनीहरूले भित्ताको बारेमा रौतलाई भने, तर अझै पनि उनीहरूले पनि अण्डरियाको मनोचिकित्सक, डा। स्टारब्याङ्कलाई जानकारी दिएनन्। जुलाई 20 मा, अन्ड्रियाले उनको गर्दनमा एउटा चाकू राखे र उनको पतिलाई मर्न दिन आग्रह गर्यो।
अधिक बच्चाहरु को जोखिम को बारे मा चेतावनी दी
एन्ड्रिया फेरि फेरि अस्पतालमा गएर 10 दिनसम्म बिरालोनी राज्यमा बसे। विभिन्न औषधिहरु को इंजेक्शन संग उपचार गरे पछि उनको मनोचिकित्सा को एक हडडोल मा Haldol, उनको अवस्था तुरुन्त सुधार भयो।
दुर्व्यवहारको बारेमा जंगली आशावादी थियो किनकि अन्ड्रियाले त्यो व्यक्तिलाई पहिले भेट्टाएको व्यक्ति जस्तै अधिक देखिन्छ। डा। स्टारब्याङ्कले योट्सलाई चेतावनी दिए कि अर्को बच्चालाई मानसिक व्यवहारको थप एपिसोड ल्याउन सक्छ। अन्ड्रियालाई बाहिर-मेघादार हेरविचार र हलडोलमा राखिएको थियो।
भविष्यको लागि नयाँ आशा:
अन्ड्रियाको परिवारले रौतलाई घर फर्केर घर फर्कने क्रममा बसोबास बस्यो। उनले एक शान्त सहरमा राम्रो घर किन्नुभयो। एक पटक उनको नयाँ घरमा, अन्ड्रियाको अवस्थाले सुधार गर्यो कि त्यो अघिल्लो क्रियाकलापहरूमा स्विमिंग, खाना पकाउने र केहि समलिङ्गीमा फर्किए। उनी पनि आफ्ना छोराछोरीसित राम्रो कुराकानी गरिरहेका थिए। उनले रिसाएको कुरा गरे कि उनको भविष्यको लागि बलियो आशाहरु थिए तर अझै पनि उनको जीवनमा बसोबास गरे जस्तो भयो।
2000 को मार्चमा, अन्ड्रियाको रौतहटको आग्रह गर्दै गर्भवती भए र हलडोल लिन छोड्यो। 30 नोभेम्बर, 2000 मा मरियम जन्मेको थियो। अन्ड्रियामा काँकिरहेका थिए तर मार्च 12 मा उनको बुबाको मृत्यु भयो र तुरुन्तै उनको मानसिक अवस्था खुसी भयो। उनले बोल्नै छोडेनन्, तरल पदार्थलाई इन्कार गरे, आफूलाई तुल्याइदिए, र मरियमलाई खान नदिने। उनी पनि साहसी भई बाइबल पढ्छन्।
मार्चको अन्त्य सम्म, अन्ड्रियाले फर्किन बिभिन्न अस्पताल। उनको मनोचिकित्सक, डा। मोहम्मद सइदले उनको छोटो व्यवहारलाई हल्दोलसँग व्यवहार गरे तर यसलाई रोक्न भनिन् कि उनी मानसिक लागेनन्। एन्ड्रियालाई केवल मेगामा फर्किनु मात्र रिहा गरियो। उनी 10 दिनपछि रिलीज भएको र सईदसँग उनको अन्तिम पछाडि भ्रमणमा उनीहरूलाई सकारात्मक सोच र एक मनोवैज्ञानिक देख्न भनिएको थियो।
जुन 20, 2001
जुन 20, 2001 मा रौतले कामको लागि छोडे र तिनको आमालाई सहयोग पु ¥ याउन अघि, अन्ड्रियाले दुई वर्षसम्म उनको भनाई राख्ने कामलाई कारवाही गर्न थाले।
अन्ड्रियाले पानीको साथमा पानी भत्काइयो र पावलसँग सुरू गरे, तिनले व्यवस्थित रूपमा तीन साना केटाकेटीहरूलाई डुबाइदिए, त्यसपछि उनीहरूलाई आफ्नो बुडमा राखे र तिनीहरूलाई छोडे। मरीले टबमा फिसिङ छोडिदिए। अन्तिम बच्चा जीवित पहिलो जन्म, सात वर्षीय नूह थियो। उनले आफ्नो आमालाई मरियमसँग कस्तो गलत सोधे, त्यसपछि फर्काइयो र भाग्यो। अन्ड्रेजी उनको साथ पकडे र चिल्लाए जस्तै, उनले तिनलाई तान्न र उसलाई मरियमको अस्थायी शरीरको छेउमा ट्याबमा हार्यो। उनले असाध्यै लडाई गरे, दुई पटक हावाको लागि आउँदै थिए, तर अन्धाले उनलाई मारे जबसम्म उनको मृत्यु भयो। नूहमा नूह छोडेर तिनले मरियमलाई बिस्तारै ल्याए र तिनका भाइहरूका हातमा राखे।
अरेनियाको इज्जतको बेला, उनीहरूले आफ्नो कार्यको व्याख्या गरे कि उनी एक राम्रो आमा थिएनन् र बच्चाहरू "सही ढंगमा विकास हुँदैनन्" र उनीहरूलाई दण्डित गर्न आवश्यक थियो ।
उनको विवादास्पद परीक्षण तीन हफ्ते थियो। ज्यरीले राजधानीलाई राजधानीको हत्याको दोषी पाए, तर मृत्युदण्डको सजायको सट्टामा तिनीहरूले जेलमा जीवनको लागि मतदान गरे। 77 वर्षको उमेरमा, वर्ष 2041 मा, अन्डोल पेरोलको लागि योग्य हुनेछ।
जुलाई 2006 मा, छ हनुमान ज्यूरीले छ जना पुरुष र छ जना महिलाहरूलाई अवार्डको कारणले हत्याको दोषी छैन।
यो पनि हेर्नुहोस्: अर्डर याट्स को परीक्षण
थेरेसा एन्ड्रयूज प्रकरण
नट किबी को अपराध
निकोलस यरिस: प्रोभेन इनसेन्सिन्स सम्म निस्क्रिय
किन तुकोक शाकुरलाई पक्राउ गरियो
फ्लोरिडाको मौत पंक्ति क्रमामेन्ट टिफनी कोल
वार्ड वेवर केस: एशले पाण्डे र मिरांडा गडिस मर्डर
केन्याकी बेरी एक शिशुलाई मारियो र अर्कोलाई मार्न चाहियो
जेनिफर हडसन पारिवारिक मृतकहरू
कार्ली ब्रूसिया को हत्या
Betty Lou Beets of Crimes
7 लोकप्रिय सिनेमा जॉन ग्रिशिम नोभेल्सको आधारमा
पेलोनेजमेन्टिकल पुनर्निर्माण - अतीतमा मौसम कस्तो थियो?
औद्योगिक क्रांतिमा कोइला
क्यानाडा आयकरहरुको लागि T4A (पी) कर पर्ची को वर्णन
अनिवार्य '9 0s आर एन्ड बी एन्ड आत्मा एलबम
Van der Waals बलों परिभाषा
दूरी सूत्र बुझ्ने
Enargia को विवरण
बुबाको कथा कल ट्याप
टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी प्रवेश
2022 सम्म बृहस्पति साइन तालिका - तपाईंको खोजी गर्नुहोस्
वृषभ र वृश्चिक प्रेम संगतता
चीन मा कब्र स्वाद दिन
डेरा फ्रिस्चुट्ज सारांश
चार शैतानिक क्राउन नरकका राजकुमारहरू
बिल शारीरिक कर्मीको नागरिक स्वामित्व बन्नेछ
वायु प्रदूषणको परिभाषा
तुलसी छुपाउने होक्स बाहिर
पूंजीवादलाई "ग्लोबल" बनाउने5कुरा
काबा: इस्लामिक उपासना को फोकल प्वाइंट
रोलिन्स कलेज जीपीए, एसट र एक्ट डेटा
खेल बिस्तारमा कसरी पैसा कमाउँछ?
पानीको लागी चित्रकारी युक्तिहरू शुरुवातका लागि
2006 Dodge Ram 3500 टर्बो डीजल पिक ट्रक समीक्षा
कलको अर्थ र उत्पत्तिलाई कल गर्नुहोस्
गल वास्प्स, पारिवारिक सिनेपिडाई